Dejero LIVE + NewsBook ဆော့ဝဲလ်သည် BGAN Satellite Terminal များ အသုံးပြု၍ ဗွီဒီယို Uplinks ကို Enable လုပ်ရန် Update လုပ်သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Dejero တိုက်ရိုက် + NewsBook ဆော့ဝဲ BGAN ဂြိုဟ်တု Terminator ကိုသုံးပြီးဗီဒီယို uplink Enable မှနောက်ဆုံးရေးသားချိန်
Dejero တိုက်ရိုက် + NewsBook ဆော့ဝဲ BGAN ဂြိုဟ်တု Terminator ကိုသုံးပြီးဗီဒီယို uplink Enable မှနောက်ဆုံးရေးသားချိန်
အခုတော့အဝေးမှတည်နေရာများ မှစ. ထုတ်လွှင့်ထုတ်လွှင့်-အရည်အသွေးဗီဒီယိုများအတွက်ဗီဒီယိုပညာရှင်များမှရရှိနိုင်သောကပ်လျက်တည်ရှိ Connections ကို၏ Range မှ Added BGAN
Waterloo, အွန် - မေလ 27, 2015 - Dejero ယနေ့ Mac အတွက်မှတ်စုစာအုပ်၎င်း၏တိုက်ရိုက် + NewsBook ဆော့ဖ်ဝဲတစ်ခု update ကိုကြေညာခဲ့သည်။ + NewsBook တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုအတွက်အလွန်စွယ်စုံ "go-ဘယ်နေရာမှာမဆို" ဗွီဒီယိုကို uplink ဖြေရှင်းချက်သို့ Mac အတွက်မှတ်စုစာအုပ်ပြောင်းလဲ LIVE HD သို့မဟုတ် SD ဗီဒီယိုအားပြန်လည်ထုတ်လွှင့်စက်ရုံရန်, files တွေကိုမှတ်တမ်းတင်ထားသောနှင့် edited အဖြစ်, feeds ။ သစ်ကိုဖြန့်ချိမှုနှင့်အတူတိုက်ရိုက် + NewsBook ယခုဘယ်နေရာမှာမဆို Inmarsat ရဲ့ဖြင့်ဖုံးလွှမ်းကမ္ဘာပေါ်မှာထံမှအင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုကို enable ပြုလုပ်ခရီးဆောင် Broadband ဂလိုဘယ်ဧရိယာကွန်ယက် (BGAN) ဆိပ်ကမ်း၏အသုံးပြုမှုကိုထောကျပံ့ ဂြိုဟ်တု ကွန်ယက်ကို။ BGAN ထောက်ခံမှုအပြင်, သစ်ကိုဖြန့်ချိခြွင်းချက်ရုပ်ပုံအရည်အသွေးအဖွင့်, 10 Mb / s အသက်ရှင်-streaming အများဆုံးနည်းနည်းနှုန်းကိုတိုးပွါးနှင့်အခြားစွမ်းဆောင်ရည်အဆင့်မြှင့်တင်မှုများပေးထားပါတယ်။
"ဒီတိုက်ရိုက် + NewsBook software ကိုတတ်နိုင်သမျှနည်းနည်းဂီယာနှင့်အတူခရီးသွားနေစဉ်ဝေးလံသောနေရာများကနေတိုက်ရိုက်သို့မဟုတ်မှတ်တမ်းတင်ထားသောဗီဒီယိုအားအကြောင်းအရာပေးပို့ဖို့လိုအပျသူလယ်ပြင်သတင်းထောက်တွေကို, နိုင်ငံခြားသတင်းထောက်များ, နှင့်ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်မှုကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအဘို့အပြီးပြည့်စုံသောဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ပါသည်။ ယခုနောက်ဆုံးပေါ်လွှတ်ပေးရန်နှင့်တကွ, software ကို ပို. ပင်စွယ်စုံယခင်ကထက်ဖြစ်ပါတယ် "ဟုဘရိုင်ယန် CRAM, CEO ဖြစ်သူကပြောပါတယ်, Dejero။ "ဒီလို, ဆယ်လူလာကို Wi-Fi နှင့် Ethernet ကဲ့သို့သောအခြားကွန်နက်ရှင်လမ်းကြောင်းအပြင်အသုံးပြုသူများယခု BGAN ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ access လုပ်နိုင် ဂြိုဟ်တု ကွန်ယက်ကို - ဝေးလံသောနေရာများကနေထုတ်လွှင့်အရည်အသွေးအကြောင်းအရာထုတ်လွှင့်စဉ်ကအစဉ်အဆက်ထက် ပို. လွယ်ကူကိုချိုးဖောက်သတင်းနှင့်တိုက်ရိုက်ဖြစ်ရပ်များကိုဖုံးလွှမ်းရန်အောင် "။
ဆယ်လူလာမျိုးစုံအဆိုပါ NewsBook software ကိုခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်, Wi-Fi Ethernet နဲ့ခရီးဆောင် ဂြိုဟ်တု အရည်အသွေးမြင့်မြင့်ယုံကြည်စိတ်ချရနှင့်အနိမ့်အောင်းနေချိန်တွင်ဗီဒီယို၏ဂီယာတစ်ခုစုပေါင်းဒေတာလမ်းကြောင်းကိုဖန်တီးရန်ဆက်သွယ်မှု။ ဤသည်စွမ်းရည်တစ်ဦးကို virtual သတင်းကိုဖန်တီးရန်အလွတ်တန်း stringers, မိုဘိုင်းမီဒီယာဂျာနယ်လစ်များနှင့်သတင်းထောက်အဖြစ်လုပ်ဆောင်ကြောင်း "တဦးတည်းပုဂ္ဂိုလ်-band" ထုတ်လုပ်သူ, အယ်ဒီတာများနှင့် On-လေထုအခွက်တဆယ်ဖို့အဓိကသတင်းကွန်ရက်နိုင်ငံခြားသတင်းထောက်များအနေဖြင့်လူတိုင်းအတွက်ဖြေရှင်းချက်စံပြစေသည် မည်သည့်တည်နေရာမှဗျူရို။
BGAN ဆိပ်ကမ်းများအတွက်ထောက်ခံမှုများ၏ထို့အပြင်ရိုးရှင်းစွာတစ်ဦးသည် Ethernet cable ကိုသုံးပြီး Mac အတွက်မှတ်စုစာအုပ်မှတစ်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းခြင်းနှင့်ခရီးဆောင် BGAN terminal ကိုချိတ်ဆက်ပြီးသည်တောမှတိုက်ရိုက်သို့မဟုတ်မှတ်တမ်းတင်ထားသောဗီဒီယိုကိုပေးပို့ဖို့သူတို့ကိုဖွင့်ဤအသုံးပြုသူများအတွက်အခြားဆက်သွယ်မှု option ကိုထပ်ပြောသည်။ အဆိုပါ BGAN ချိတ်ဆက်နည်းနည်းနှုန်းကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်အကောင်းဆုံးရုပ်ပုံအရည်အသွေးကိုကယ်လွှတ်ခြင်းငှါအခြားရရှိနိုင်ကွန်ရက်များနှင့်အတူကပ်လျက်တည်ရှိနိုင်ပါသည်, သို့မဟုတ်ပါကအခြားအကြိုးသို့မဟုတ်ကြိုးမဲ့ကွန်ယက်ကိုချိတ်ဆက်မှုများကိုရရှိနိုင်မဟုတျပါရှိရာအရပ်တွင်တစ်ဦးတည်းရပ်လို့ရပါတယ်။ တစ်ဦး BGAN connection ကိုရွေးချယ်ထားသည့်အခါအဆိုပါ NewsBook software ကိုအလိုအလျှောက်ထုတ်လွှင့် settings ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေ။
အဆိုပါတိုက်ရိုက် + ဗီဒီယိုကိုပလက်ဖောင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းအခြားမိုဘိုင်းက transmitter နှင့် applications များနှင့်ဝသကဲ့သို့, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ feeds တွေကိုနှင့် NewsBook ဆော့ဖ်ဝဲကိုအသုံးပြု encoded နှင့်မှတဆင့်ကူးစက်သောမှတ်တမ်းတင်ထားသောအကြောင်းအရာ, စောင့်ကြည့်အစမ်းကြည့်နှင့်တိုက်ရိုက် + ထိန်းချုပ်ရေးကနေရှုံးနေကြ Dejero'' s ကိုမိုဃ်းတိမ်ကိုစီမံခန့်ခွဲမှုကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။
ယင်းနှင့် ပတ်သက်. ပိုမိုသိရှိလိုပါက Dejero LIVE + NewsBook ဆော့ဝဲလ်နှင့် LIVE + ပလက်ဖောင်းအပြည့်အစုံကို www ။dejero.com ။
Dejero ဝေးလံခေါင်ဖျားဝယ်ယူ, မိုဃ်းတိမ်ကိုစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် IP ကိုကျော်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တိုက်ရိုက်ဗီဒီယို multiscreen ဖြန့်ဖြူးရိုးရှင်းစွာ။ ၎င်း၏တိုက်ရိုက် + ပလက်ဖောင်းထုတ်လွှင့်မီဒီယာအဖွဲ့အစည်းများ, နှင့်မိုဘိုင်းထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီများသည်ယုံကြည်စိတ်ချရသောချက်ချင်းသူတို့ရဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာတီဗီ, ကို web နှင့်မိုဘိုင်းပရိသတ်တွေရောက်ရှိရန်နှင့်ကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်စွာမှနိုင်ပါတယ်။ Dejero'' s ကိုစီးပွားဖြစ် cloud-based ပလက်ဖောင်းအသိဥာဏ်နီးပါးဘယ်နေရာကနေမဆိုထုတ်လွှင့်အရည်အသွေးတိုက်ရိုက်ဗွီဒီယိုကိုကယ်လွှတ်ခြင်းငှါကြိုးများနှင့်ကြိုးမဲ့ကွန်ယက်ကိုဆက်သွယ်မှုများကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်ချည်နှောင်ခြင်းကို။ Waterloo, အွန်, ကနေဒါ, ရုံးချုပ် Dejero ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိမိုဘိုင်းဗီဒီယိုထည့်ဝင်မှုအတွက်ယုံကြည်ထားသည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက, www www ။dejero.com ။
Image ကို Link ကို: www.wallstcom.com/Dejero/Dejero-LIVEplusNewsBookandBGAN.jpg
Image ကိုစာတန်းထိုး: အများ၏နောက်ဆုံးရေးသားချိန်ဗားရှင်း Dejero + NewsBook ဆော့ဝဲ BGAN ပံ့ပိုးမှုနှင့်အတူအသက်ရှင်
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ Dejero + NewsBook LIVE ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2015-05-29
ယခင်: Netflix ၏ Neil Hunt ကအင်တာနက်ကိုအသက် (ETIA) ညီလာခံအတွင်း SMPTE Entertainment ကနည်းပညာမှာ Keynote Give မှ
နောက်တစ်ခု: Artel ဗီဒီယိုစနစ်များအမည်များကိုသမ္မတအဖြစ်သူ Mike Rizzo